Muqdisho City Vs Dekedda Fc- Xogta Kulankan Oo Dhameystiran Xili Tababare Hussein Mblango Shaqada Kooxda Laga Diray. – Gool FM
Muqdisho City Vs Dekedda Fc- Xogta Kulankan Oo Dhameystiran Xili Tababare Hussein Mblango Shaqada Kooxda Laga Diray.
(Soomaaliya) 02 Luulyo 2019. Kooxaha Dekedda iyo Muqdisho City Club ayaa galabta ku balansan garoonka Banadir Stadium ciyaar ka tirsan Horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan, labada kooxod ayaa diyaar garow xoogan u galeyn kulankan in midkood uu badiyo, waana kulankii 86-aad ee laga dheelayo horyaalka Somali Premier League.
Labadan kooxod ayaa ciyaari doona galabta kulankii ugu dambeyay ee horyaalka Somali Premier League, waana ciyaar labo waji leh taas oo aan kala jeedo Dekedda fc oo rabta iney ku guuleysato horyaalka markii 3-aad oo xiriir ah halka Muqdisho City Club ay daneeneyso iney ka baxdo abaarta guuldaro la’aanta ee ka heesato wiilasha Dekedda fc.
Kooxda xafidaneysa horyaalka Somali Premier League ee Dekedda ayaa u muuqaneysa mid ka itaal roon dhigooda Muqdisho City Club maadama 12-kii kulan ee ugu dambeysay ay ka guuleysteyn 7-kulan halkan shanta kalana ay dhibcaha kala qaateyn labada dhinac tartamada oo dhan.
Labadan kooxod kulankii ugu dambeyay ay isku arkan wajiga hore ee horyaalka waxaa 1-0 ku soo adkaatya naadiga Dekedda fc ciyaar dhacday 4-4-19.
Sido kale waa si rasmi ah kooxda Muqdisho City Club ugu tagay macalin Hussien Mblango kaas oo mudo dheer ku sugna kooxda.
Xidigaha Muqdisho City Club ayaa doonaya iney meesha ka saaran taariikhda xun ee diiwanga ugu qoran taas oo ah in aysan guul ka gaarin Dekedda 12-kii Kulan ee Ugu Dambeysay oo ay Dekedda ku wajahan dhamaan tartamada oo dhan, mana ku qanci doonan wax aan aheyn guul ay ka soo hooyan dheesha Dekedda.
Muqdisho City Club kulankii ugu dambeyay waxey qasaaro 5-4 kala soo kulantay naadiga Jazeera Sports Club, halka Dekedda ay gool madi ah ku soo dhaaftay Kooxda Heegan fc.
FURSADAHA LABADA DHINAC:
Kooxda kubadda cagta Dekedda kulankan waa mid muhiim u ah iney ka guuleysato Muqdisho City Club ama ay bar baro la gasho , maadama oo yahay kulankii ugu dambeyay ay ku rumeeyn laheyd iney ku guuleysato markii 3-aad ee horyaalka Somali Premier League xiriir ah.
Wiilasha Muqdisho City Club ayaa doonaya iney iska dhaqan guuldaradii ka soo gaartay kooxda Jazeero Sports Club, kuna soo gabagabeyan horyaalka guul.
Muqdisho City Club hadii ay kulankan guul ka gaarto Dekedda waxey soo cariirsan doonta kaalinta 3-aad oo hada ay isku heestan kooxaha Heegan iyo Elman kuwaaso oo wada leh min 29-dhibcood halka Muqdisho City Club ay leedhahay 26-dhibcood farqiga goolasha aye ku soo gali doonta, waana sheeko kale oo xiiso badan.
Dhamaan taageerayasha kooxda Dekedda kulankan waxey ka dhoor sugayan in ay u dabaal dagan hanashada horyaalka Somali Premier League.
Kooxda kubadda cagta Dekedda kulan ciyaareedkan waxaa ka maqnaanaya xidigeeda Feysal Xasan Xaashi kaas oo kulankii ugu dambeyay roos ka qaatay kooxdiisa.
Muqdisho City Club kulankan waxaa shaki laga galinaya ciyaaryahankeeda Baanu kaaso oo macquul ay tahay in uu ku seego xanuun rabaani.
Kooxaha: Dekedda Fc VS Mogadishu City Club
Nin yaqaana Cilmiga Falaga oo saadaaliyay xulka adkaan kara caawa Brazil iyo Argantina